TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Feb 28, 2003
Barnaamujka Caawa waxyaabaha aan idiinku hayno waxaa ka mid ah.
Ø Dagaalo ay Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ku qaadeen Ciidamada cadawga Itoobiya.
Ø Ciidamada Itoobiya oo Dad Shacab ah ku laayay Xuduuda Ogaadeenya iyo Waqooyiga Soomaaliya.
Ø Shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida oo ay kooxo badan ka biya diidsan yihiin.
Ø Waraysi aanu la yeelanay Madaxwaynaha JWXO.
Ø Warbixin kooban oo ku saabsan Banaanbixii ka dhacay Magaalada London ee lagaga soo hor jeeday Ra'isalwasaaraha Itoobiya Melis Zenawi iyo waliba suugaan aad ka heli doontaan.
Dagaalo ay Ciidamada wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ku qaadeen Ciidamada cadawga Itoobiya.
Wariyaha Radio Xoriyo Darwiish Dalmar oo ku sugan Jeeda hore ee Ciidanka Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ayaa noo soo tabiyay Dagaalo dhex maray Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya iyo Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee ku sugan Ogaadeenya. Ciidanka Xoreenta Ogaadeenya oo u dagaalama Madax banaanida Dhulka Ogaadeenya ayaa Daagaalo ay ku naafeeynayaan Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ku qaaday xarumaha ay ku leeyihiin qaar ka mid ah Gobolada iyo Dagmooyinka Ogaadeenya. Dagaaladii ugu danbeeyay ayaa waxay ka dhaceen goobahan soo socda.
15.02.2003 Dagaal ay ku qaadeen Ciidamada Xoreenta Ogaadeenya Saldhig ay ku lahaayeen Ciidamada Xaqdarada iyo Cadaadiska Shacabka lagu yaqaano ee Gumaysiga Itoobiya Deegaanka Milmil, waxay kaga dileen 13 Askari waxayna kaga dhaawaceen 17 Askari oo kale.
15.02.2003 Dagaal Gaadmo ah oo ay Ciidamada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya ku qaadeen Ciidamada Gumaysiga Itoobiya oo maraya Meesha lagu magacaabo Bulxan oo ka tirsan Gobolka Dhagaxbuur waxaa Ciidamada Doolka iyo Gardarada ku jooga Ogaadeenya ay kaga dileen 7 Askari waxayna kaga dhaawaceen 12 Askari oo kale.
16.02.2003 waxay Ciidamada geesiyiinta Xoreenta Ogaadeenya weerar ku qaadeen Ciidamada Naflacaariga Gumaysiga Itoobiya oo marayay meesha lagu magacaabo Dhidinka oo ka tirsan Gobolka Wardhee. Weerarkaas ayeey waxay Ciidamada Wadaniga Xoreenta Ogaadeenya kaga dileen Ciidamada Nacabka Gumaysiga Itoobiya 7 Askari oo uu ka mid ahaa Askari uu Asalkiisii ahaa Soomaali waxayna kaga dhaaweceen 14 Askari oo kale.
16.02.2003 Iska hor imaad Dagaal oo ku dhex maray Ciidamada Gumaysiga Itoobiya Magaalada Caado ayay iskaga dileen 21 Askari waxayna iskaga dhaaweceen 35 Askari oo kale.
Iska hor imaadkan keenay Gacan ka hadalka Dhimashada iyo Dhaawaca badanba dhaliyay, ayaa waxuu ka danbeeyay Gadood ay sameeyeen Qaar ka mid ah Ciidamadaas oo ka soo jeeday Qoomiyada Oromada. Ciidamadan gadooday ayaa waxay ka cabanayeen maamul xumo iyo gacan bidixen ay ku sameeyeen Saraakiisha aagaas oo ka soo jeeda Qoomiyada Talada wadanka Itoobiya haysa ee Tigreega. Ma aha markii ugu horaysay ee dagaal noocaas ah uu ka dhex dilaaco Ciidamada gumaysiga Itoobiya, waxayna hada ka hor isku laayeen magaalooyinka Qabridahare, Wardheer, Dhagaxbuur Goday iyo meelo kale oo bada.
16.02.2003 waxaa Ciidamada Cadawga Itoobiya ee Saldhigoodu yahay Magaalada Goday ka baxsaday 40 Askari. Ciidamadaas ayaan la ogeeyn meel ay Cidhib iyo jaan dhigeen balse waxaa la sheegayaa in ay aadeen dhinaca Galbeedka Itoobiya oo ay ka yimaadeen mar koodii hore. Ciidamadan oo sita Hubkoodii ayaa waxaa la filayaa in ay reerahoodii u kicitimeen kadib markay u adkaysan waayeen Cadaalad darada ka dhex jirta Ciidamada Itoobiya dhexdooda iyo Dagaalada Joogtada ah ee ay ku hayaan Xoogaga Gobonimo doonka ah. Ma aha markii ugu horaysay ee ay baxsadaan qaar ka mid ah Ciidamada Dacdareeysan ee gumyasiga Itoobiya.
20.02.2003 Dagaal ay Ciidamada Xoreenta Ogadeenya ku qaadeen Ciidamo Maliishiyo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa Deegaanka Abaaqorow ayay kaga dileen 3 Askari waxayna kaga dhaawaceen 4 Askari oo kale. Dagaalkaas ayay Ciidamada Xoreentu waxay kaga furteen meleeshiyadii ay dagaalka iskaga horyimaadeen 1 Qori.
Wararka naga soo gaadhaya deegaanka wajaale ayaa sheegaya 3 Ruux oo ay ku dileen Ciidamada Cadawga Itoobiya ee lagu yaqaano gardarada iyo Cadaadiska Shucuubta ee Deegaanka Togwajaale. Dilkan ayaa waxuu ka danbeeyay kadib markay Ciidamada Itoobiya rasaas ku fureen Baabuur uu saaraa dad shacab ah oo marayay deegaankaas. Dadka ku geeriyooday toogashadaas ayaa waxay ahaayeen Hal nin iyo Laba Dumar ah. Dadkaas oo qaarkood ka soo jeeday waqooyiga Soomaaliya ayaan lagaraneeyn waxay Ciidamada Itoobiya u dileen. Mar maamulka gabilay uu wax ka waydiiyay Masuuliyiinta Ciidamada Itoobiya ee Togwajaale waxa keenay dilkan ayaan wax jawaab ah oo cad laga siin, Balse waxay Ciidamada Itoobiya soo dhoobeen Xuduuda Ciidamo aad u fara badan oo aan u jeedada ka danbeeysa lagaran.
Dhinaca kale waxay Ciidamada Itoobiya Xuduuda Gobolada Bay iyo Bakool ka wadaan Abaabul ay kula shirayaan saraakiil Soomaali ah oo ay rabaan in ay Gobolada Bay, Bakool iyo guud ahanba Soomaaliya Dagaal ka oogaan. Kulamadan oo ay si qarsoodi ah u yeelanayaan Saraakiil Itoobiyaan ah iyo kuwo Soomaali ah ayaa lafilayaa in ay Itoobiya ku abaabulayso Dagaal culus oo mar Labaad ka sii oogma Soomaaliya.
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Nairobi ayaa sheegaya Caqabado ku soo food yeeshay Shirka dib u heshiisiinta Soomaalida uga socda Duleedka Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Shirka kooxaha Soomaalida uga socda wadanka Kenya ayaad moodaa in uu mar walba la kulmayo Caqabado qarka u saaraya in uu burburo. Inta badan kooxaha Soomaalida ayaa isku khilaafa tirada ka qaybgalayaasha shirka oo ay koox walba dooni sadbursiinyo iyo tuhun ay kala dhex dhigayaan qaar ka mid ah Dawladaha lagu tilmaamo Safka hore ee IGAD. Shirkan oo furmay horaantii Todobaadkan ayaa waxaan ka soo qaybgalin qaar ka mid ah kooxaha siyaasada Soomaaliya isku haya iyo waliba Dawlada ku meel gaadhka ah ee Soomaaliya. Isbahaysiga lamagac baxay G8 iyo Dawlada ku meelgaadhka ah ayaa diiday in ay ka qaybgalaan Shirka ka furmay Magaalada Nairobi, halka ay soo xaadireen kooxaha SRRC ee gacan saar la leh Xukuumada Itoobiya. Kooxahan diiday Shirka in ay ka qaybgalaan ayaa waxay sheegayaan in shirkan ay wadato Dawlada Itoobiya oo aan doonayn Dawlad Soomaaliyeed oo soo noqota, sidaas daraadeed waxay dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaan in ay iska ilaaliyaan dibindaabyada Xukuumada Itoobiya iyo in ay Dalkooda si wada jir ah nabad ugu soo dabaalaan oo laysu tanaasulo.